<<< HOT NEWS >>>
Subject: <<< HOT NEWS >>> Sun Nov 12, 2006 8:45 am
Please share whatever news in this thread friends !
Let our Brothers and Sisters know !
Last edited by on Mon Nov 13, 2006 8:01 pm; edited 1 time in total
Subject: Re: <<< HOT NEWS >>> Sun Nov 12, 2006 12:58 pm
In theses days, the hot news is Saddam Hussen's news.
He will be executed at the end of this year.
Who will be the next war criminal?
Subject: Re: <<< HOT NEWS >>> Sun Nov 12, 2006 1:07 pm
စနေနေ့ စထရိတ်တိုင်းထဲမှာ ၁၇ နှစ်ကောင်လေး သူများ ၀ါယာလက် ကိုခိုးသုံးတာ မိသွားလို့ ပြစ်မှုထင်ရှားရင်တော့ ထောင် ၃ နှစ်နဲ့ ဒဏ်ငွေ ၁၀ ၀၀၀ တဲ့ဗျာ... ကျွန်တော်တို့ မောင်မယ်များလဲ သတိထားစေချင်ပါတယ်... သိုသို သိပ်သိပ်တော့ လုပ်ကြပေါ့... ကြည့်ရတာ အဲဒီချာတိတ်တော့ စံပြထင်ပါရဲ့...
Subject: Re: <<< HOT NEWS >>> Mon Nov 13, 2006 7:16 pm
စလုံးမှာ ၁ကျပ်တန် အသစ်ထွက်နေပြီဗျ... ဒီနေ့ ကျွန်တော် ပြန်အမ်းငွေ ရတာ အသစ်ကလေး... ( ရှိတဲ့ သတင်းလေးပဲ ဖွနေရတာ အဟီး )
Subject: Re: <<< HOT NEWS >>> Thu Nov 16, 2006 5:52 pm
A tsunami is expected to hit the north and east coasts of Japan, the country's meteorological agency says.
It comes after an earthquake of at least 7.7 magnitude hit the Kuril Islands, north of Japan.
The earthquake struck about 390km (240 miles) east of the Etorofu islands, at 1115 GMT, the meteorological agency said. Other smaller waves may batter the Pacific coast of Japan over the next hour, the agency said.
A tsunami is expected to hit Russia and northern Japan, the US Pacific Tsunami Warning Center says.
Subject: Re: <<< HOT NEWS >>> Sat Nov 18, 2006 8:35 am
This news will shock all of you.
Subject: Re: <<< HOT NEWS >>> Sat Nov 18, 2006 8:45 am
ko ye gyee yay,datine so mee point tway taung zout htoe phyit kon tot me' pon pe' byooo.
Subject: Re: <<< HOT NEWS >>> Sat Nov 18, 2006 3:37 pm
ကိုရဲကြီးနော် ဖိုရမ်မှာ No Color ပါဆိုမှ ဘာလို့ သုံးရောင်ခြယ်ကြီး ထည့်ရတာလဲ... အက်ဒမင်တွေ ကင်းမလှည့်သေးလို့နေမှာ နို့မို့ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ မသိ... ဟီဟိ... ဘရာဇီးတို့ ပြင်သစ်တို့ အားကျလို့ထင်တယ်... ကိုစွာပြောတာလဲဖြစ်နိုင်တာပဲ...
Subject: Re: <<< HOT NEWS >>> Sat Nov 18, 2006 6:12 pm
This is the news from Burmese news paper Mirror. I just share this news to all of my friend.
Hope you are not going to delete my post.
Subject: Re: <<< HOT NEWS >>> Sat Nov 18, 2006 6:44 pm
ခင်ဗျားကလဲ စိုးရိမ်ရန်ကော... ခင်ဗျားပြောပုံက အက်ဒမင်တွေကပဲ Black & Whiteတွေလိုလို...(ကာလာမပါတာကိုဆိုလိုတာပါ)...ဒါလောက်ကတော့ အေးဆေးပါ နော့... (ကိုယ်လဲ ခပ်လန့်လန့်ရယ်...)
Subject: Re: <<< HOT NEWS >>> Thu Nov 30, 2006 8:10 pm
ဒါကတော့ ICကလုပ်မယ့် စင်ကာပူက ရှိုးပွဲပါ... ကိုစွာက ရှက်လို့ မတင်ချင်ဘူးဆိုလို့ ကျွန်တော်ကသူ့ ကိုယ်စားတင်ပေးတာပါဗျာ... ဆဲစရာရှိရင် သူ့ကိုဆဲပြီး ကျေးဇူးတင်မည်ဆိုပါက ကျွန်တော့် ကိုသာတင်ကြပါကုန်........
လက်မှတ်က ပင်နီဇွဲလား က #03-23,
အဆိုတော်တွေက တော့ .... အငဲ မျိုးကြီး ၀ိုင်ဝိုင်း အာဇာနည် ဖြိုးကြီး အယ်လွန်းဝါ ဆုန်သင်းပါရ် ကြိုးကြာ စင်ဒီ
အချိန်က ညနေ ၆ နာရီ
ဆိုမယ့်ရက်က ၂၁.၀၁.၂၀၀၇ (စင်ကာပူမှာ Rain နဲ့အပြိုင်ပေါ့ဗျာ...)
လက်မှတ်က S$ ၆၀, ၅၀, ၄၀, ၃၀ (ဈေးကတော့ ရိန်းနဲ့ မတိမ်းမယိမ်းပေါ့နော်)
နေရာက Jurong East Sport & Cultural center
Last edited by Sai Nanda on Thu Dec 21, 2006 6:29 pm; edited 1 time in total
Subject: &#4144;lets support ic! Fri Dec 01, 2006 8:57 pm
ကိုနန်ဒကြီးနော် သူ့ကိုခင်လို့ အရင်ပြောတာကို သူကလူသိရှင်ဂျားလုပ်သယ်။
လူသိရှင်ဂျားလုပ်တာတော့ အတော်ဝါသနာပါပုံရတယ် ( မယုံရင် သူ့ gtalk က personal message ကိုကြည့်ပါဘြို့ )။
ကဲ ကဲ ....... အတည် အတည်
iC ကို အားပေးလိုက်ကြရအောင်ပါ။
လက်မှတ်ဖိုးလေးတွေ ကဘာ့ အဆင့်မှီတာကတော့ ဂုဏ်ယူစရာမဟုတ်လားဗျာ ။
juron east မှာဆိုတော့ clementi သားတွေ boon lay သားတွေ အတွက်လည်း အဆင်ပြေတာပေါ့ ။
boon lay သား ကိုစည်သူဆိုရင် လက်မှတ် ၂ စောင်တောင် တိုးတိုးတိတ်တိတ် ၀ယ်ထားတယ်ဆိုပဲ ။
(သတင်းစာထဲတော့ပါဦး တော့မှာပဲ )
Last edited by on Fri Dec 01, 2006 9:13 pm; edited3times in total
Subject: Re: <<< HOT NEWS >>> Fri Dec 01, 2006 9:11 pm
(သတင်းစာထဲကော့ပါဦး တော့မှာပဲ )
ဟုတ်မယ်ဗျို့ ဒါကြောင့် သတင်းစာထဲမှာ တွေ့မိသလိုပဲ...နေဦးဗျာ...ပြန်ရှာလိုက်ဦးမယ်...တွေ့ရင် ဒီမှာတင်ပေးမယ်...ကိုစည်သူရေ အနော် ရှာလိုက်ဦးမယ် ခင်ဗျားသတင်းလေးကို...
ဘာတဲ့ ထိုင်ခုံက ဆိုက်(ဒ)ကြီးမရလို့ တောင် Heart Music Production Pte Ltd ကို ကွိုင်သေးဆိုလားပဲ...နေဦး နေဦး သေချာပြန်ရှာပေးမယ်ဗျာ... ဟတ် ကတိုင်ထားတာထင်တာပဲ... သတင်းစာထဲကိုပါရော... ကိုစည်သူတို့များ ဇွတ်...
Subject: Re: <<< HOT NEWS >>> Sat Dec 02, 2006 9:03 pm
ခုနောက် နိုဝင်ဘာ ၁၆ ကစပြီး ဒီ-ဖောင် ကို ပန်းဆိုးတန်းမှာ မလုပ်ရတော့ပဲ online ကနေလုပ်ပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်... ကိုယ့်email ကိုဖော်ပြပြီး ဘဏ် (၃) မှာ ငွေ ၂၀၀ ကို စာရင်းအမှတ် SF-001723 ကိုသွင်းလိုက်ရင် ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုယ့်ရဲ့ မေး(လ) ကို approval letterပြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်... အသေးစိတ်ကို အောက်မှာကြည့်ပါ...
Subject: Re: <<< HOT NEWS >>> Sat Dec 02, 2006 10:07 pm
glad to know that if it is functional..................
Subject: Re: <<< HOT NEWS >>> Sun Dec 03, 2006 4:06 pm
ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်လိုက်ရတဲ့ the sunday times ထဲက သတင်းလေး ၁ ပုဒ်ကို share ပေးလိုက်ပါတယ်။
Subject: Re: <<< HOT NEWS >>> Sun Dec 03, 2006 5:18 pm
8th batch မှ marine electronic engineer အဖြစ် singapore နိုင်ငံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော သက်ဆင် သည် သင်္ဘော တည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာရပ်များ လေ့လာရေးအတွက် စပိန်နိုင်ငံသို့ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ယနေ့စင်္ကာပူစံတော်ချိန် ညနေ ၇ နာရီတွင် ထွက်ခွါရာ မိသားစုမှ ချန်ဂီလေဆိပ်တွင် ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်သည်။စပိန်နိုင်ငံ မဒ်ဒရစ်မြို့တွင်နေထိုင်စဉ်အတွင်း real madrid club မှအသင်းသားများ ပိုစတာများနှင့်ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်မည်ဖြစ်ကာ training လေ့ကျင့်ပုံများကိုလည်း ချောင်းကြည့်ခဲ့မည်ဖြစ်သည်။ အခွင့်သင့်ပါက နွားရိုင်းသတ်ပွဲတွင်လည်း ပါဝင်ဆင်နွဲမည်ဖြစ်သည်။ ပါရီမြို့သို့transit ၀င်စဉ်ဠ်လည်း ပြင်သစ်သားရေ(french leather)လုပ်ငန်းများကို လေ့လာခဲ့မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Subject: Re: <<< HOT NEWS >>> Sun Dec 03, 2006 6:34 pm
မိသားစု.... သူ့အိမ်ကလာပြီး လိုက်ပို့တာလား... ဒါမှမဟုတ် .. အဟိ... အဟိ... မိသားစု မိသားစု... အင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး.............................
Subject: Re: <<< HOT NEWS >>> Sun Dec 03, 2006 6:57 pm
<< That's is Thet Zin Mg Mg par !
GREAT MAN ! CHEERS !
Subject: Re: <<< HOT NEWS >>> Sat Dec 23, 2006 10:12 pm
ကဲ ၀ါယာလက်(စ) အလားကား ဆိုင်းအပ် လုပ် လို့ ရပါပြီ... ဒါပေမယ် စင်ကာပူက ညီအစ်ကို မောင်နှမများပဲ သုံးလို့ ရပါမယ်... ဒီအတွက် စိတ်မကောင်းပါ... ဘာပဲပြော ပြော ရသူများအတွက်တော့ အသုံးဝင်တာပေါ့ဗျာ...
လင့် က ဒီမှာပါဗျာ...
Subject: Re: <<< HOT NEWS >>> Sat Dec 23, 2006 10:19 pm
wow3years free dude, thanks u very much, i just finished
after finished u can get free gift from creative, wow thanks again fri' here the message
Subject: Re: <<< HOT NEWS >>>